दाङमा रातमा पनि व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्नुुपर्छ - Chetana Online
Chetana Online ७ फाल्गुन २०७७, 2:22 am
न्यू टि थ्री प्यालेस, घोराही १५ दाङ
न्यू टि थ्री प्यालेसका सञ्चालक लिला डिसी दाङमा पनि रातको समयमा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनुुपर्ने बताउनुुहुन्छ । मुलुकको आर्थिक विकासका लागि कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । दाङमा होटल व्यवसायको सम्भावना, व्यवसायीका समस्या, दाङमा लगानीको सम्भावना लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर चेतना अनलाइनका सम्पादक पाण्डव शर्माले डिसीसँग गरेको कुराकानिको सार।
अहिले दाङमा होटल व्यवसाय कस्तो छ ?
अहिले कोरोना महामारीका कारणले समग्र मुलुकको व्यववसाय नै अप्ठेरो अवस्थामा पुुगेको छ । लामो समयसम्मको लकडाउनले सबै व्यापार व्यवसाय ठप्प भएको अवस्था थियो ।
यस मध्ये सबैभन्दा बढी मारमा परेको व्यवसाय भनेको होटल व्यवसाय हो । यो बीचमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान अप्ठेरो भयो । यसले गर्दा होटल व्यवसाय पूर्ण रुपमा प्रभावित भयो ।
अहिले लकडाउन खुुलेको छ । कोरोना महामारीको प्रभाव पनि कम भएको छ । यस कारणले गर्दा विस्तार होटल व्यवसाय आफ्नो ट्रयाकमा फर्कदै छ । तर, अहिले पनि पूूर्णरुपमा होटल व्यवसाय सुुधार हुन अँझै केही समय लाग्छ ।
होटल व्यवसायीहरुको समस्या के हो ?
होटल व्यवसायीहरुको समस्या धेरै छन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा समस्या भनेको राज्यको नीति हो । राज्यको अव्यवहारीक नीतिका कारणल होटल व्यवसायीहरुले समस्या ब्यहोर्नुुपरेको छ । दाङमा अहिले बेलुकी ९ बजेपछि होटल बन्द गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ ।
यो पूर्णरुपमा होटल व्यवसायीको विपक्षमा छ । हामीले होटल व्यवसायलाई फष्टाउन दिने हो र मुुलुुकको अर्थतन्त्र बलियो बनाउने हो भने रातिसम्म होटल सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुुपर्छ ।
काठमाण्डौ., पोखरा लगायतका ठूला शहररुमा अहिले पनि रात्रिकालिन व्यापारहरु सञ्चालनमा भइरहेका छन् । अब दाङमा राज्यले सुरक्षाको प्रवद्र्धन्द गरेर रातिमा पनि व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुुपर्छ ।
दाङमा होटल व्यवसायको सम्भावना कत्तिको देख्नुुहुन्छ ?
दाङ साविकको राप्ती अञ्चलको केन्द्रविन्दु नै हो । अहिले लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङ घोषणा भएकाले पनि यहाँ होटल व्यवसायको राम्रो सम्भावना छ । तर, अब हामीले दाङमा परम्परागत ढंगले होटल व्यवसाय गरेर हुँदैन । नयाँ पुुस्ता अहिले निकै आधुुनिक भएका छन् । उनीहरुको अपेक्षा धेरै छ ।
अहिले विस्तारै दाङमा होलट संस्कृतिको विकास हुुँदैछ । मान्छेहरु विहे गर्न, जन्मदिन मनाउन अथवा कुुनै खुसियालीका लागि होटलमा आउने संस्कारको विकास भइरहेको छ । यो राम्रो पक्ष हो । अब हामीले परम्परागत ढंगले होटल व्यवसाय गरेर हुँदैन ।
दाङमा अब होटल व्यवसाय कस्तो होला ?
दाङमा अहिले विस्तारै गुुणस्तरीय होटलहरु पनि खुल्न थालेका छन् । विगतमा राम्रा होटल नहुँदो राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रमहरु नेपालगञ्ज वा बुुटवलमा हुुने गर्दथ्ये । अब भने दाङमा ठूूला होलट खुल्न थालेका छन् । यो निकै राम्रो कुुरा हो ।
मुलुक भरका व्यवसायीहरुका साझा समस्या नै हाम्रो समस्या हो । दाङमा पनि केही विशिष्ट प्रकारका समस्याहरु छन् । घरभाडा सम्बन्धी विवाद यहाँका प्रमुख समस्या हो । व्यवसायी र घरधनिबीच उचित समन्वय नहुँदा समस्या भइरहेको छ । निश्चित भाडा दर बनाइनुपर्छ ।
दाङमा अहिले पनि उद्यामी भन्दा व्यपारीहरु धेरै हुनुहुन्छ । यहाँका व्यवसायीहरुलाई उद्यमी बनाउन सरकारले विशेष योजना ल्याउन जरुरी छ । राजश्व सम्बन्धी व्यवसायीहरुलाई जानकारी छैन । सरकारले पनि राजश्व विषयमा स्पष्ट नीति बनाउन सकेको छैन । राजश्वको सिलिङ विवाद पनि एउटा प्रमुख समस्या हो ।
दाङ लगानीका लागि सम्भावना बोकेको जिल्ला हो । दाङमा कृषि उद्योग नै लगानीको प्रमुख क्षेत्र हो । प्रशस्त खेती योग्य जमिन भएकाले दाङ कृषि उत्पादन राम्रो गर्न सकिन्छ ।
माछापालन, पशुपाल, बाख्र, बुुंगुर तथ गाई पालन गर्न सकिन्छ । साथै जडिबुटी उद्योगहरु पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ । दाङ पर्यटकीय क्षेत्र पनि हो । यहाँका ताल तलैया, मण्दिर, गुफा तथा वन जंगल पर्यटकीय गन्तव्य बन्न सक्छन् । साथै छिमेकी जिल्ला प्युठानमा रहेको स्वर्गद्धारी जानको लागि दाङलाई छुनै पर्छ ।
यसको फाइदा दाङको होटल व्यवसायले लिन सक्छ । दाङमा होटल व्यवसायको सम्भावना पनि राम्रो छ । दाङमा पछिल्लो समय ठूला लगानीका होटलहरु खुल्न थालेका छन् । अँझै दर्जनौ ठूला होटलहरु खुल्न सक्छन् । समथर भूभाग र राम्रो हावा पानि भएकाले दाङमा ठूला प्रकृतिका उद्योगहरु पनि स्थापना गर्न सकिन्छ ।
पूर्वी नेपालको तुलनामा पश्चिम नेपालमा उद्योग धन्दाहरु धेरै खुल्नसकेका छैनन् । तर, पश्चिम नेपालमा बजारको सम्भावना राम्रो छ । दाङ पश्चिम नेपालकै केन्द्रविन्दु भएकाले सबै खाले उद्योग धन्दा खोल्न सकिन्छ ।
यहाँको भौगोलिक अबस्था र हावा पानि नै लगानीको प्रमुख आधार हो ।
दाङ दक्षिण एशियाकै ठूलो उपत्यका हो । यहाँको हावा पानि निकै राम्रो छ । कच्चपदार्थहरु पनि पर्याप्त मात्रामा छ । सिमेण्ट उद्योगको लागि चुनढुंगा, कोइलाको खानि प्रशस्तै छ । दाङ भारतीय सिमासँग पनि जोडिएको छ । उद्योगधन्दाको बजारीकरणका लागि दाङमा कुनै समस्या छैन ।
यहाँको समग्र आर्थिक विकासका लागि सबैभन्दा बढी पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । पूर्वाधार निर्माण विना मुलुकको आर्थिक विकास हुन सक्दैन ।
सबैभन्दा पहिले सडक सञ्जाल निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्छ । हुन त पछिल्लो समय दाङमा सडक सञ्जाल निर्माण भइरहेका छन् । सहिदमार्गलाई पूर्णता दिनुपर्छ । दाङ–सुर्खेत सडक, लमही–कोइलावास सडक, घोराही–मुर्कुटी–प्यूठान लगायतका ठूला सडक परियोजनाहरु समयमै सम्पन्न गरिनुपर्छ ।
यसले गर्दा दाङलाई छिमेकी मुलुक भारत र पश्चिम नेपालका विभिन्न जिल्लाहरुसँग प्रत्यक्ष जाड्छ । यहाँको उत्पादनलाई ती ठाउँमा लैजान र त्यहाँ उत्पादीत अत्यावश्यकीय बस्तुलाई यहाँ ल्याउन सजिलो पर्ने छ । तुलसीपुर विमानस्थमा नियमित उडान गर्न सकियो भने पनि यहाँको पर्यटन प्रवद्र्धनमा निकै सहयोग पुग्नै छ ।
साथै हवाई सेवा व्यापारीक प्रयोजनका लागि पनि प्रयोग हुन सक्छ । पछिल्ला वर्षहरुमा दाङमा विभिन्न प्रकृतिका उद्योगहरु पनि खुलिरहेका छन् । धाराको टुटि उद्योग, विस्कुट उद्योग, ग्यास प्लाण्ट लगायतका उद्योहरु खुलिरहेका छन् । आगामी दिनमा यस्ता प्रकृतिका ठूप्रै उद्योगहरु खुल्न सक्छन् ।
अन्त्यमा तपाईलाई भन्न मन लागेको ?
सबैभन्दा पहिले त मेरो बिचार राख्ने अबसर प्रदान गर्नुभएकोमा तपाई र तपाईको लोकप्रिय पत्रिकालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । दाङको आर्थिक तथा समग्र विकासका लागि दीर्घकालिन गरुयोजना बनाउनुपर्छ । यहाँको पूर्वाधार निर्माणमा राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
उद्योगी तथा व्यवसायीहरुको क्षमता विकासका लागि राज्यले स्पष्ट योजना लिनुपर्छ । पश्चिमा देशहरुमा राजश्व तिर्नेहरुलाई विशेषखालको सम्मान गरिन्छ । नेपालमा भने व्यवसायीलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण नै सकरात्मक बन्न सकेको छैन । हामी व्यसायीहरुले पनि आफ्नो कमि कमजोरीलाई सच्चाएकार ग्राहको मन जित्न सक्नुपर्छ ।
नेपाल औषधी व्यवसायी संघ लुम्बिनी प्रदेशको प्रथम अधिवेशनबाट लुकराज न्यौपाने महासचिव पदमा निर्वाचित हुनुुभएको छ । मुुलुुकको स्वास्थ्य क्षेत्रको सुुधारका लागि राज्यले स्पष्ट नीति तय…
प्रेमबिना संसार चल्दैन । प्रेमले जीवन जिउन सजिलो बनाउँछ । प्रेम प्रकट गर्नु नराम्रो होइन तर आफ्नो संस्कृतिलाई बिर्सेर अरुको संस्कुतिलाई गलत तरिकाले अगांल्नु चाँहि…
शालिकराम आचार्य अध्यक्ष नेपाल औषधी थोक व्यवसायी संघ लुम्बिनी प्रदेश नेपाल औषधी थोक व्यवसायी संघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष शालिकराम आचार्य दाङलाई स्वास्थ्य उपचारको हब बनाउन…